श्रमिक सूचना र सन्देश – Page3– आप्रबासी कामदार समाज (आकास) नेपाल
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६८
16Nov21 (क) नेपाल १. नेपाल र भारतका बिच अब सातामा ५६ वटा उडान हुनेभएकाछन । (ख) साउदी अरब २. साउदी अरबका गृह मन्त्रीले साउदी अरबका लागि कतारका राजदूत संग…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६८
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६७
15Nov21 (क) नेपाल १. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएका छन् । गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले बुधबार बिहान शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६७
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६६
14Nov21 (क) नेपाल १. नेपालको चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका बिभिन्न बिधाका अध्ययनका लागि शैक्षिक सत्र २०७७-७८ का शुल्कहरू तोकेको छ । जसमध्य MBBS डक्टरका…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६६
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६५
13Nov21 (क) नेपाल १. अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सडक मार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६५
12Nov21 (क) नेपाल १. नेपाली कामदारहरूलाइ सुब्यवस्थित र निशुल्क कतार लान भनि खोलिएको कतार भिषा सेन्टर (QVC) ब्यवहारतः सिण्डिकेट बनाएर कामदारहरूसंग रकम असुलिरहेको शिलापत्रले खुलासा गरेको छ । (ख)…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६४
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६३
11Nov21 (क) नेपाल १. आज कार्तिक २५ गतेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय जन गणना शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति देखि लिएर प्रत्येक नेपाली नागरिकको घर घरमा पुगेर करिब ४० हजार…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६३
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६२
10Nov21 (क) नेपाल १. नेपालमा आगामी कार्तिक २८ देखि मंसीर ४ गतेसम्म पि फाइजर नामको कोभिड भ्याक्सिन पहिलो पटक लगाइने भएको छ । यो खोपका १ लाख ६२० डोज…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६२
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६१
9Nov21 (क) नेपाल १. स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फँडानी रोक्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६१
श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६०
8Nov21 (क) नेपाल १. बर्तमानमै नेपालको न्यायपालिका बिवादित बनेको छ । भावी दिनमा बिवादित मात्रै हैन, राजनैतिक आस्था र पृस्ठभूमिका कारण दलिय कित्तामा बिभाजित हुने खतरा समेत मडराएको छ…
Continue Reading श्रमिक सूचना र सन्देश – ५६०
7Nov21 श्रमिक सूचना र सन्देश – ५५९ (क) नेपाल १. सुन्दर ट्रेर्डस प्रालिले बजारमा ५ वटा मोडेलमा इभी नाम गरेका नयाँ फिचरसहितका इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइलबाट…